डो Dong्ग्वान एनुओ मोल्ड कं, लिमिटेड ह Hongक Kong BHD समूहको एक सहायक कम्पनी हो, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन र निर्माण भनेको उनीहरूको मुख्य व्यवसाय हो। यसबाहेक, धातुका भागहरू सीएनसी मसिining्ग, प्रोटोटाइप उत्पादनहरू आर एण्ड डी, निरीक्षण फिक्स्चर / गेज आर एन्ड डी, प्लास्टिकका उत्पादहरू मोल्डि,, स्प्रेइ and र असेंब्ली पनि संलग्न हुन्छन्।
तातो स्प्रिंग + रमाइलोको लागि वन फ्रिफ्टिंग!
ननकुन्सन तातो स्प्रि Health्ग स्वास्थ्य भ्यालीको यात्रा - दिनको लागि पानी परिरहेको छ र मलाई थाहा छैन वसन्त बितिसकेको छ। एक पटक मौसम ठीक भएपछि, मैले महसुस गरे कि गर्मी लामो समयको लागि आइपुगेको छ। समय सँधै हाम्रो अनजानो बाटोमा हुन्छ, २०१ 2019 को क्यालेन्डर जुनमा बदलिएको छ, र तातो योग ...
नमस्ते साथीहरु, हेर्नुहोस् अमेरिकी कसरी तपाईंको मोल्ड स्तर न्याय गर्दछ!
चीनमा निर्यात गर्ने मोल्ड निर्माताको रूपमा, घरेलु मोल्डसँग तुलना गरेर, मोल्डको निर्यात विगतका वर्षहरूमा निश्चित रूपमा उच्च छ, यो अन्तर भिन्न साथी मानकको कारणले हुन्छ। अमेरिकन सोसाइटी अफ प्लास्टिक उद्योग (SPIAN-१००-78)) ले मोल्डलाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्दछ। यी पाँच प्रकारका मोल्ड हभ ...
२K ओभर मोल्डिंग मोल्ड पूर्व विकृत मोल्ड सीएनसी मिलिंग CNC Lathing प्रोटोटाइप उत्पादनहरू मोल्ड हटाईयो प्रेसिजन मोल्ड बहु-गुहा मोल्ड गाडी ईन्जिन कभर ठूलो आकार मोल्ड कार्यालय र घर उपकरणहरू
अमेरिकामा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कम्पनीहरू प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कम्पनीहरू अमेरिकामा प्लास्टिक उत्पादन अमेरिकामा रैपिड मोल्ड जर्मनीमा टुलि .्ग अमेरिकामा मोल्ड निर्माता अमेरिकामा फ्यान र फ्यान कफन अमेरिकामा मशीनरी भाग अमेरिकामा मेटल पार्ट्स मशीनिंग जर्मनीमा प्लास्टिक उत्पादन प्लास्टिक उत्पाद संयुक्त राज्य प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जर्मनीमा प्लास्टिक मोल्डिंग जर्मनीमा रैपिड मोल्ड अमेरिकामा प्रोटोटाइप मोल्ड अमेरिकामा इंजेक्शन मोल्ड जर्मनी मा प्लास्टिक इंजेक्शन जर्मनीमा इंजेक्शन मोल्ड अमेरिकामा प्रोटोटाइप उत्पादन जर्मनीमा प्रोटोटाइप उत्पादन अमेरिकामा प्लास्टिक मोल्ड जर्मनीमा डाई मोल्ड अमेरिकामा प्लास्टिक मोल्डिंग अमेरिकामा डाई मोल्ड जर्मनीमा प्लास्टिक मोल्ड जर्मनीमा जिग्स अमेरिकामा टुलि .्ग अमेरिकामा एयर र पानी ट्याank्क अमेरिकामा जिग्स जर्मनीमा मोल्ड निर्माता जर्मनीमा एयर र पानी ट्याank्क जर्मनीमा गेज जर्मनी मा पूर्वानुमान ढालना अमेरिकामा मोल्ड मेकर अमेरिकामा गेज जर्मनीमा फ्यान र फ्यान कफन अमेरिका मा पूर्वानुमान ढालना संयुक्त राज्य अमेरिका मा रेडिएटर भाग जर्मनीमा रेडिएटर भाग जर्मनीमा मेटल पार्ट्स मशीनिंग